Malunga nathi -Beijing Hengqianxiang International Trade Co., Ltd.
I-Beijing Hengqianxiang International Trade Co., Ltd. eyafunyanwa ngo-Sep 2012, yingqokelela yoyilo, imveliso kunye norhwebo lokudibanisa amashishini amakhulu. Umzi-mveliso wethu unenkqubo yemveliso eqolileyo kunye nenkqubo yolawulo. Sineefektri ezininzi ezisebenzisanayo zexesha elide, zilungele ukukhangela kunye nokuhambisa iimpahla. Inkampani yethu inamava eminyaka engamashumi amabini yoyilo, imveliso kunye nokuthengisa ngezixhobo zangaphambili, ubuchwephesha obuhle kunye nesimbo sokuqala. Sineempawu zethu ezizimeleyo ezizimeleyo, "i-ZHANSHI", "INDLOVU YASEMPUMA", "ISIKHOKELO SENKONZO" njl.
Isinxibo sethu sophawu lwenkampani sisekwe kwibhantshi enephedi, ibhatyi esezantsi, ibhatyi yebhombu, idyasi yoboya, ibhatyi ye-PU kunye ne-windbreaker njl iimpahla zamadoda nabafazi. Ukunikezela ngokubaluleka komgangatho olungileyo kunye nokuma kwesimbo sefashoni, iimveliso zethu ziyathandwa ngenani elikhulu lokulandela ifashoni kunye nomgangatho wamaqela abathengi abathembekileyo, ukuthengiswa kakuhle eMntla Melika, eYurophu nase Mzantsi Afrika.
Inkampani yethu ivelisa rhoqo iimarike ezintsha, iimveliso ezintsha, ukusetyenziswa kwetekhnoloji entsha, ukujova izinto ezintsha zamazwe aphesheya, ukuqonda imeko yophuhliso lweempahla zamanye amazwe, ukwakha "Ishishini lempahla yamazwe aphesheya uphawu lodidi lokuqala"Ngaphezulu. Silayisha i"intuthuzelo","ukwenza okuphezulu","intsha"uyiloumgangatho kuqala", msgstr "umthengi ophambili"njengeyona nto iphambili kwimveliso yobuninzi; siya kuthengisa e"ukunyaniseka","inoxanduva","phumelela-phumelela". Emva kweminyaka emininzi yophuhliso oluqhubekayo, inkampani ineemarike ezinzileyo ngoku kwaye sijonge phambili ekusekeni ubudlelwane beshishini kunye nentsebenziswano yexesha elide kunye nenkampani yakho ebekekileyo. Sikholelwa ukuba ngemizamo yethu edibeneyo, siza kudala ixabiso elifanayo kunye nekamva elihle.